Okusha Kumasinema Kuphela - Ukhisimusi Nabakhethiwe: The Messengers
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Chofoza lapha uma lokhu kungukukhishwa kwakho kwabezindaba! » Okusha Kumasinema Kuphela - UKhisimusi Nabakhethiwe: The Messengers
Ukuphawula okwenzeka emhlabeni wonke kweThe Chosen, UKHISIMUSI NABAKHETHIWE: ABATHUNYWA, owokuqala we-franchise ukubonwa emasinema ezweni lonke nge-Fathom Events, idayiswe ngesikhathi sokusakazwa bukhoma okuvela e-Dallas Jenkins ngoLwesibili ebusuku, futhi yaphula amarekhodi angaphambi kokuthengisa umsabalalisi.
“UKHISIMUSI NABAKHETHIWE: IZITHUNYWA zephule irekhodi le-Fathom Events ngokudayisa izigidi ezingu-1.5 zamarandi emahoreni ayi-12 okuqala,” kusho uRay Nutt, oyi-CEO ye-Fathom Events. "Ekuqaleni ihlelelwe ukukhonjiswa kumathiyetha angu-1079, sesivele sengeze izindawo ezingu-450+ nezinkulungwane zezikrini ukuze sanelise isidingo futhi silindele ukuthi lezi zinombolo zizoqhubeka nokukhula."
Idutshulwa ngasese, IZITHUNYWA zikhombisa ukuzalwa kukaKristu ngeso likaMariya noJosefa futhi ihlanganisa abalingisi bochungechunge oluthi The Chosen.
Lo mcimbi futhi uhlanganisa amaciko namaqembu angamaKristu angajwayelekile ahlanganisa uPhil Wickham, Maverick City Music, For King and Country, Brandon Lake nabanye abaningi.
Umcimbi wenzeka kumatiyetha amamuvi kusukela ngo-Dis. 1. Izikrini ezintsha nezinsuku zokudlala ziyengezwa ukuze kuhlangatshezwane nesidingo, futhi i-TheChosen.tv/Christmas izoba nolwazi lwakamuva lwendawo yangakini. UKHISIMUSI NABAKHETHIWE: IZITHUNYWA zikhululwa nge-Fathom Events.
"Ngesikhathi sinquma ukwenza isiqephu sikaKhisimusi esikhethekile, sasazi ukuthi kuzoba isikhathi esifanelekile sokuthola lokhu esikrinini esikhulu," kusho uchungechunge lwe-Creator, Writer and Director Dallas Jenkins. “Yithuba lokuqala abalandeli be-Chosen abathole ukuhlangana kulo lonke izwe, ngakho sihlose ukukwenza lokho. Futhi njengoba bonke abaculi abamangalisayo behlangene, lesi umcimbi omuhle kakhulu wokumema abangani. "
Uhlu lwabadlali bakaKhisimuzi ABAKHETHIWE: I-MESSENGERS okwamanje ihlanganisa:
• I-Maverick City Music
• Okwenkosi nezwe
• I-Brandon Lake
• Ikhwaya Yezingane Yezwi Elilodwa
• Umndeni wakwaBonner
• Thina UMbuso
• Abalingisi abavela ku-The Chosen abalingisa ama-monologues:Austin Reed Alleman (Nathaniel) Giavani Cairo (Thaddeus) Luke Dimyan (Judas)Lara Silva (Edeni)